संवाद बिर्साउने मधुबालाको सौन्दर्य ! - The Public Today
संवाद बिर्साउने मधुबालाको सौन्दर्य !
मुम्बई, मंसिर २ गते । जहिले पनि भारतीय फिल्मी जगत् (बलिउड) भित्र सुन्दर अनुहारका विषयमा चर्चा हुन्छ, त्यसबेला मानिसले मधुबालाको नाम सुरुमै लिन्छन् ।
मधुबालाको नाम लिनासाथ उनका अनेक छवि आम दर्शकको मन-मस्तिष्कमा छाउँछ । त्यो चाहे ‘महल’ को रहस्यमयी मधुबाला हुन् वा ‘मिस्टर एन्ड मिसेज ५५’ की सहरी युवतीको छवि । ‘हावडा ब्रिज’ की मादक नर्तकी हुन् वा ‘मुगल-ए-आजम’ की दासी अनारकली, जसको आकर्षण कुनै राजकुमारीभन्दा कम देखिँदैन !
मनमोहक, सुन्दर र ताजापन भरिएको उनको अनुहारको आभाले सबैलाई मोहित बनाउँछ । त्यतिबेला तपाईंले मधुबालाबाहेक अरू कुनै अनुहारको बारेमा सायद सोच्नु हुन्न ! मधुबालाको सौन्दर्यको अनुमान गर्न चाहने हो भने सन् १९९० को एउटा फिल्मी पत्रिकाले मधुबालालाई पहिलो स्थानमा राखेको देख्‍न सकिन्छ । जसमा नर्गिस दत्त दोस्रो स्थानमा परेकी छन् ।
सौन्दर्यका साथै विशेष अभिनय शैलीका लागि परिचित अभिनेत्री मधुबालाको निधन भएको पनि पाँच दशक बितिसकेको छ, तर आज पनि उनलाई चाहने, उनका प्रशंसक प्रशस्त भेटिन्छन् । जसले सदैव मधुबालाको सम्झना गर्दै आइरहेका छन् ।
सबैभन्दा सुन्दर मधुबाला
मधुबाला सँगसँगै डेब्यु गर्ने अभिनेता राज कपुरले एकपटक मधुबालाका बारेमा भनेका थिए- ईश्वरले आफ्ना हातहरूले नै मधुवालालाई रचना गरेका हुन् । राज कपुरको यो कथन पेन्गुइन इन्डियाद्वारा प्रकाशित, भाइचन्द पटेलद्वारा सम्पादित ‘बलिउड टप २०, सुपरस्टार्स अफ इन्डिया’ मा रेकर्ड गरिएको छ ।
यसै पुस्तक अनुसार, शिवसेना संस्थापक बाल ठाकरेले फिल्मी जगत्‌मा आफूले काम गरेका दिनहरूको सम्झना गर्दै भनेका छन्- जब मैले सुटिङ गर्दैगर्दा मधुबालालाई देखेँ, मलाई लाग्यो, मेरो त्यो दिन सफल भयो !
प्रख्यात अभिनेता शम्मी कपुरले आफ्नो आत्मकथा ‘शम्मी कपुर द गेम चेन्जर’मा एउटा पूरा भाग (च्याप्टर) मधुबालालाई समर्पित गरेका छन् । यसको शीर्षक रहेको छ, ‘फेल मेडली इन लव विद मधुबाला’ ।
यसमा शम्मी कपूर भन्छन्- मलाई थाहा थियो कि मधु अरू कसैलाई प्रेम गर्छिन्, तर पनि म स्वीकार्न चाहन्थेँ । किनभने मैले उनलाई पागलजस्तै प्रेम गर्न सुरु गरिसकेको थिएँ । यसमा कसैलाई दोष दिने कुरो आउँदैन । किनभने मैले उनीजस्ती सुन्दरी कहिल्यै देखेको नै थिइनँ ।
सन् २०११ मा प्रकाशित यस आत्मकथामा शम्मी कपूरले भनेका छन्- ६ दशकपछि पनि आज जब उनी मधुबालाका विषयमा सोच्दछन्, उनको मुटुको धड्कन रोकिन्छ । मधुबालाको सुन्दरताको चमक यस्तो थियो कि शम्मी कपुरले आफ्नो पहिलो फिल्म ‘रेल का डब्बा’को सुटिङका समयमा मधुबालालाई देखेपछि आफूले बोल्नुपर्ने संवादहरू नै बिर्सिन्थे !
कुल ३६ वर्षको उमेर, जीवनको अन्तिम ९ वर्ष आफ्नै घरमा बन्दी हुनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था र जम्मा ६६ वटा फिल्म, तर मधुबालाले यही समयमा सबै कुरा हासिल गरिन्, जसले उनलाई सदासदाका लागि अमर बनाइदियो ।
मधुबालाको जन्मदेखि नै मुटुमा प्वाल थियो । डाक्टरहरूका अनुसार उनलाई धेरै आराम चाहिन्थ्यो । तर मधुबालाका बुबाले उनलाई यस्तो संसारमा धकेले, जहाँ उनले निरन्तर काम गर्नुपर्ने हुन्थ्यो ।
वास्तवमा मधुबाला, आफ्नी आमा बुबाको मात्रै नभएर भाइबहिनीसमेत गरेर परिवारका ११ जनाको जीवन धान्ने एक्लो व्यक्ति थिइन् । उनका बुबा लाहोरको इम्पिरियल टोबाको कम्पनीमा काम गर्थे । जब उनको जागिर छुट्यो, त्यसपछि उनी दिल्ली आए । फेरि दिल्लीबाट मुम्बई गए । त्यहाँ पुगेर उनलाई लाग्यो, आफ्नी सुन्दर छोरी मधुबालाले फिल्ममा काम पाउन सक्छिन् ।
र, मात्र ६ वर्षको उमेरमा मधुबालाले फिल्मी दुनियाँमा पाइला टेकिन् ! सन् १९५७ को फिल्म फेयरको एक विशेष सिरिजमा उनले आफ्नो काममा कति समय दिएकी थिइन् भन्ने झलक पाइन्छ ।
उक्त सिरिजमा त्यसबेलाका सुपरस्टारहरूलाई आफ्नो बारेमा केही लेख्‍न भनिएको थियो । जसमा नर्गिस, मीना कुमारी, नूतन, राज कपुर, दिलीप कुमार, देव आनन्द, किशोर कुमार, अशोक कुमार सबैले आफ्नाबारेमा लेखेका थिए ।
आफ्नै बारेमा मधुबाला
फिल्म फेयरको सो सिरिजमा मधुबालाले आफ्ना बारेमा लेख्‍न अस्वीकार गरेकी थिइन् । उनले माफी मागेकी थिइन् र आफ्नो माफिनामामा मधुबालाले लेखिन्, “मैले आफैंलाई गुमाइसकेकी छु । यस्तो अवस्थामा आफ्नै बारेमा के लेखूँ । मलाई लाग्छ, तपाईंले मलाई त्यसका बारेमा लेख्न भन्नु भएको छ जसलाई म चिन्दिनँ । समयले मलाई आफैंसँग भेट्ने समय पनि दिइरहेको छैन । जब म ५ वर्षकी थिएँ, त्यसबेला मेरा बारेमा कसैले केही सोधेनन् र म यो ‘चक्रव्यूह’मा आइपुगेँ । फिल्म उद्योगले मलाई सिकाएको पहिलो कुरा हो, तपार्इंले आफ्ना बारेमा सबै कुरा बिर्सनुपर्ने हुन्छ । सबै कुरा, त्यस पछि मात्रै तपाईंले अभिनय गर्न सक्नुहुन्छ । यस्तोमा मैले मेरा बारेमा के लेखूँ !”
मधुबालाको फिल्मी जीवनलाई लिएर खतिजा अकबरले एउटा पुस्तक लेखिन्, ‘आई वान्ट टू लिव- द स्टोरी अफ मधुबाला’ । यस पुस्तक पढ्दा थाहा हुन्छ कि मधुबालाको सौन्दर्यले उनको अभिनयप्रति अनुशासन र केही सिक्ने चाहना र लगनलाई कहिल्यै कम हुन दिएन ।
मधुबाला त्यतिखेर फिल्म जगतकी एकमात्र यस्ती कलाकार थिइन्, जो तोकिएको समयभन्दा अगाडि नै सुटिङ सेटमा पुग्थिन् । यद्यपि उनको स्वास्थ्य कारण उनी राति गरी सुटिङ गर्थिनन् । उनले आफ्नो पूरा करिअरमा कहिल्यै आउटडोर सुटिङ गरिनन् । यति हुँदाहुँदै पनि मधुबाला आफ्नो समयको शीर्ष अभिनेत्रीहरूमध्ये एक थिइन् ।
(प्रदीप कुमार/बीबीसी/सम्पादित अंश)